फेसबुकमा प्याजे गफ ! – " सुलभ खबर "
केहीकेही भएकै कुरा, धेरै उट्पट्याङ गफ । जे भए पनि प्याजको भाउ बढेपछि मान्छेका दिमाग फुरेको छ । नयाँ पुस्ताका बाहुन ठिटाठिटीले त बिर्सिसकेका पुर्खालाई पनि सम्झन थालेका छन् । बाहुन ठिटाठिटीका प्याजे गफ चाहिँ यस्ता छन् : ‘आफू त ओर्जिनल बाउनको बुहारी परियो, लसुन प्याजको भाउ बढेको पनि फेसबुक हेरेर थाहा पाइन्छ ।’
‘पुर्खाले भविष्यको त राम्रै अनुमान गरेका हुन् के बाहुन बाठा हुन्छन् भनेको त्यसै होइन रैछ । हाम्रा बाउ बाजेले किन प्याज खाँदैनथे, किल्लोर भयो होला नि ?’
‘बाहुनले च्याउ खाओस्, न च्याउको बात जानोस् बाहुनले प्याज खाओस न प्याजको भाउ जानोस् संसारका ब्राम्हणहरु एक हौं, पूर्खाको सपना साकार पारौं ।’ ‘प्याजको भाउ बढोस् कि मासुको बाल मतलब भएन बस गाईले चाहिँ मुत्न छोड्नु भएन ।’
अनि प्याज बोकेर हिँड्दा शान बढेको, घरमा झ्वाईंय प्याज फुराउँदा फूर्ति बढेको र बढी भएको प्याज बैंकमा लगेर थन्क्याएको गफ पनि ओइरिरहेको छ । एउटाको घरमा आमा छोराबीच संवाद भएछ :
छोरा : बहुमूल्य सामानहरु घरमा राख्न हुन्न, बैंकमा जम्मा गर्नुपर्छ । आमा : त्यसो भए अस्ति किन्या प्याज नि बैंकमा जम्मा गराएर आइज । घरभित्रको भान्सामा मात्र होइन, घर बाहिर होटल, रेष्टुराँमा पनि प्याज फुराईभन्दा प्याजे फूर्ति बढिरहेको छ । मःम र चिकेन चिल्लीका पारखी भन्छन् – प्याजको भाउ बढ्दा फाइदा भएको छ । पहिले पहिले मःम र चिकेन चिल्लीमा मासुको सट्टा प्याज बढी हाल्थे । अहिले प्याज त बन्द नै भएछ ।
अनि उनीहरु फेरि फेसबुकमा रोइलो गर्दैछन् –भेंडे खुर्सानीको पनि भाउ बढाउनुपर्यो, चिकेन चिल्लीमा प्याजको सट्टा भेंडे खुर्सानी हाल्न थाले । थाङ्ने र उट्पट्याङ गफ मात्रै होइन, प्याजले मान्छेका दिमागलाई पनि सिर्जनशील बनाएको छ । बोधो भैसकेको दिमागमा थरिथरीका सिर्जना फुर्न थालेको छ यसरी :
‘रूनेहरूको हैन, सधैं रूवाउनेहरूको भाउ बढ्ने रहेछ नपत्याए प्याजको भाउ हेर्नुस्’ ‘डियर केटीहरु, प्याजको भाउ बढेझैैं भाउ नबढाउ बजारमा प्याज नबिकेर बसेझैं बस्नुपर्ला ।’ ‘प्याजको भाउ त के हो र त्योभन्दा छिटो तिम्रो बढेछ ।’
‘चिन्ता छ यहाँ सिमानाको तिमी प्याज प्याज भन्छ्यौ…..’ कति मान्छे चाहिँ अब सुन, चाँदी, हिराजस्तै सामान किन्दा प्याज पुरस्कार पाइन्छ कि भन्ने पर्खाईमा पनि रहेछन् । यति मात्र होइन, प्याजको भाउ बढेसँगै दर्शनशास्त्री र आदर्शवादीहरु पनि बढेका छन् । खेतमा काम गर्नुपर्छ भनेर गाउँबाट शहर पसेको मान्छे अरुलाई अर्ति उपदेश दिन्छ– प्याजको भाउ बढ्यो भनेर किन रोइलो गर्नु, आफैंले खेतमा लगाए हुन्न ? सबैले आफूलाई पुग्नेगरी प्याज फलाए त भाउ बढोस् कि घटोस् बालै भएन नि ।
अनि अर्को दर्शशास्त्री फेसबुकमै छाँट्छ – प्याजको भाउ बढ्यो भनेर किन रुवाबासी ? प्याजबिना भान्सा अड्किन्छ ? प्याज नखाए मरिन्छ ? त्यसो हो भने त प्याज मात्रै होइन, दाल नखाए नि भान्सा अड्किंदैन नि । बेसार, अदुवा र मरमसला र आलु नखाए पनि मरिंदैन । माड हालेको भात मात्रै खाए पनि हुन्छ नि । अनि मोटरसाइकल र कार नचढे पनि फरक पर्दैन । काठमाण्डौ पस्नुको सट्टा गाउँमै बसे पनि मरिंदैन । अझ मोबाइल र फेसबुक नै नछोए पनि बाँचिन्छ ।
प्याज नखाए के हुन्छ भन्नेलाई यस्तै जवाफ दिए चाहिँ के हुन्छ नि ? जाँडरक्सी नखाने मान्छे नै भेट्न मुश्किल पर्ने बेला प्याज नखाए के हुन्छ भन्न त भएन नि । लसुन नि खानुपर्छ, प्याज नि खानुपर्छ । फेसबुकमा प्याजको रोइलो गर्न छाडेर आफैले खेतबारी या कौसीमा प्याज रोपे के हुन्छ ? हुन्थ्यो नि हुन त । तर फेसबुकमा गफ छाँट्न जस्तो काम गर्न सजिलो छैन नि हजुर ! त्यस्तो सजिलो भएको भए त म पनि यहाँ प्याजे गफ छाँट्नुको सट्टा प्याजै लगाएर बस्थें नि ! तपाईं पनि फेसबुकमा प्याजे गफ पढ्न छाडेर खेतमा पस्नुहुन्थ्यो नि, होइन र ?